Ekoatera: Nakatona noho ny tsy fandoavan-ketra ny Microsoft sy ny orinasa hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2007 10:31 GMT
Gazety malaza iray ao Ekoatera no namoaka filazana ny fikatonan’ny sampan’ny Microsoft ao an-toerana ao anatin’ny fito andro raha fohy indrindra. Efa ahiahiana toy izany ihany koa ny orinasa Ekoatoriana Odebrecht sy Noboa's Banana Exporter (angamba mpanondrana akondro ity farany ity O ?). Ny antony nanakatonana ny orinasa Microsoft moa dia ny tsy namenoany na tsy namerenany hatramin’ny volana febroary 2007 ny filazan-ketra.
Nampangain’ny SRI (Servicio de Rentas Internas) na [ sampandraharahan’ny karama] ny orinasa fa indroa miantoana izay izy io no tsy nampiseho ny filazan-ketra. Nanao fanentanana teo anivon’ny firenena ny talen’ny SRI Atoa Carlos Carrasco fa mahatratra 3 arivointelo dolara ($3.000.000.000), izany hoe ny 28.6%n’ny tetibola eritreretina ho amin’ny taona 2008 ny hetra tsy tafiditra amin’izao fotoana izao.
El UNiverso no namoaka voalohany ny tantara, ary narahin’ny CNN sy ny mpibilaogy tahaka an’i Erebe.net [ES] sy ny ao amin’ny Linux en Ecuador [ES]
Eduardo Palacios [ES] no nanoratra:
Fanakatonana ao anatin’ny fito andro no hitan’ny SRI ho fanapahan-kevitra mety. Andro fito tsy hiasan’ny orinasa ary tsy horaharahian’ny mpanjifa loatra. Tsy tsaratsara kokoa ve raha onitra no ampandoavina azy ireo ?
Nitanisa ireo orinasa hafa tsy nanara-dalàna teo anatrehan’ny governemanta Ekoatoriana kosa i Carlos Jumbo [ES] :
Ankoatra an’i Microsoft of Ecuador, ireto ihany koa ireo orinasa nahazo sazy mitovy aminy noho ny heloka itovizana :Mega Saint Mary, Ambato Bakery, Agape S.A. ary Laar Cia Ltd.